ရင်သားကင်ဆာခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက် သင်နဲ့သင့်တော်မယ့် ဘရာစီယာ ရွေးချယ်ခြင်း - Hello Sayarwon
ရင်သားကင်ဆာခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက် သင်နဲ့သင့်တော်မယ့် ဘရာစီယာ ရွေးချယ်ခြင်း
သင့်မှာ ရင်သားကင်ဆာ ရှိတယ်ဆိုရင် ခွဲစိတ်မှု ခံယူရနိုင်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ပြီးရင် သင့်ရင်သားပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် အရင်ဝတ်နေတဲ့ ဘရာတွေကို ဝတ်ဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို အသစ်တွေ ဝယ်ရပါတော့မယ်။ တကယ်လို့ ရင်သားခွဲစိတ်မှုအပြီးမှာ သင့်လျော်တဲ့ ဘရာကို ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးဟာ သင့်အတွက် ဖြစ်မှာပါ။
ကင်ဆာကို ဖယ်ထုတ်ဖို့နဲ့ ရင်သားကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ ခွဲစိတ်မှုကို လိုအပ်ပါတယ်။ ကင်ဆာ ခွဲစိတ်မှုမှာ mastectomy နဲ့ lumpectomy ဆိုပြီး ပါဝင်ပါတယ်။ Mastectomy မှာ ဆရာဝန်ဟာ ကင်ဆာ ရှိနေတဲ့ ရင်သားတစ်ခုလုံးကို ဖြတ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Lumpectomy မှာတော့ ကင်ဆာနဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က ကောင်းမွန်တဲ့ တစ်ရှူးအနည်းငယ်ကို ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ရင်သားပြန်ဆောက်တဲ့ ခွဲစိတ်မှုမှာတော့ ခွဲစိတ်ဆရာယန်တွေဟာ ဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ ရင်သားပုံစံကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှုအပြီးမှာ ရင်သားပုံစံ၊ အရွယ်အစား၊ ရင်သားနဲ့ ရင်ဘတ်မှာ အာရုံခံမှု ပျောက်ရှခြင်း၊ ပူလောင်ထုံကျဉ်ခြင်းတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရင်သားထဲမှာ implant ဒါမှမဟုတ် prosthesis ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
သင့်လျော်တဲ့ ဘရာကို ဘယ်လိုရှာမလဲ။
ရင်သားပြောင်းလဲမှု တွေကြောင့် ဘရာဟာ အောက်ပါ အချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံသင့်ပါတယ်။
• ဘရာဟာ ပျော့ပြောင်းသင့်ပြီး ချွတ်ဖို့ လွယ်ကူသင့်ပါတယ်။
• သင်နဲ့ အတော်ပဲ ဖြစ်သင့်ပြီး under-band အကျယ်ကြီး ပါသင့်ပါတယ်။
• ကြိုးတွေဟာ ညှိလို့ရသင့်ပါတယ်။
• အုံအပြည့်ပါတဲ့ ဘရာကို ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ အုံတစ်ဝက်ပါတဲ့ ဘရာတွေဟာ ထောက်ပံ့မှု ကောင်းကောင်း မပေးနိုင်ပါဘူး။
• အပို တန်ဆာဆင်ထားတာတွေ အများကြီး မပါသင့်ပါဘူး။
• အောက်မှာ ဝါယာကြိုးတွေလည်း မပါသင့်ပါဘူး။
သင့်ရင်သားဟာ ခွဲစိတ်မှု အပြီးမှာ အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေမှာကြောင့် ဘရာလိုအပ်ချက်တွေဟာလည်း ပြောင်းလဲနေနိုင်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှု အပြီးမှာ ဆရာဝန်က သင့်ရင်သား ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်းကို အားပေးဖို့ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ဘရာတွေကို အသုံးပြုစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လို ဘရာပဲဖြစ်ဖြစ် အောက်မှာ ဝါယာပါတဲ့ ဘရာတွေကို မသုံးသင့်ပါဘူး။ ဒီဝါယာတွေဟာ ရင်သားထဲက implant ပေါ်မှာ ဖိအားသက်ရောက်စေခြင်း (သို့) prosthesis ကို ထိခိုကစေခြင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်အပြီးမှာ ရင်သားရောင်နေနိုင်တာကြောင့် ဘရာကို အချောင်ဆုံးနေရာမှာ ထားပြီး အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အရောင်ကျသွားရင်တော့ ဘရာနဲ့ ကြိုးတွေကို လိုအပ်သလို ညှိနိုင်ပါတယ်။
ရင်ဘတ်နဲ့ ရင်သား အရေပြားနဲ့ အနာတွေ ကျက်သွားရင်တော့ ကန့်သတ်မှု အနည်းငယ်သာ ရှိတဲ့ အခြားဘရာအမျိုးအစားတွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် prosthesis ကို ထောက်ပံ့ပေးမယ့် အုံအပြည့်ဘရာတွေကိုတော့ သုံးနေသင့်ပါသေးတယ်။
ဘရာဆိုင်ကို သွားပြီဆိုရင် စမ်းဝတ်ကြည့်သင့်ပြီး ဝန်ထမ်းကို သင်နဲ့ သင့်တော်လားဆိုတာ ကြည့်ခိုင်းသင့်ပါတယ်။ ရင်သားဖယ်ထုတ်တဲ့ ခွဲစိတ်မှုကို ပြုလုပ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ဘရာကိုလည်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင် ချုပ်တတ်ရင်တော့ ဘရာတစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ လွယ်တယ်ဆိုတာ သိရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘရာတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ဘရာတွေကို ရွေးချယ်ခြင်းဟာ အထူးသဖြင့် ရင်သားခွဲစိတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက် ပိုမို ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူက သင့်အတွက် သင့်လျော်တဲ့ ဘရာကို ရွေးချယ်ဖို့ ကူညီပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
NHS choices. Breast prostheses, bras and clothes after surgery.
After surgery. https://www.breastcancercare.org.uk/information-support/facing-breast-cancer/going-through-treatment-breast-cancer/surgery/after-surgery-change-in-sensation.Accessed February 12, 2017.
What happens after surgery. http://about-cancer.cancerresearchuk.org/about-cancer/breast-cancer/treatment/surgery/after-surgery/what-happens-after-surgery. Accessed February 12,2017.
ရင်သားကင်ဆာကုသမှုခံယူနေစဉ်အတွင်း စားသောက်ချင်စိတ်ပျောက်ခြင်းကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
ရင်သားကင်ဆာ ကုသမှုမှာ ဆေးယဉ်ပါးမှုကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ